तीजको त्यो चर्चित गीत जसको शब्दमा सबै झुक्किन्छन् : ‘तीजको रहर आयो बरी लै’ – MySansar
तीजको त्यो चर्चित गीत जसको शब्दमा सबै झुक्किन्छन् : ‘तीजको रहर आयो बरी लै’
Posted on September 3, 2019 by Salokya
यस पटकको तीज पनि सकियो। यो पालि ‘हामी पनि नाच्नु पर्छ बीच्च बीच्चमा’ले बजार पिट्यो। तर सदाबहार गीत त उही ‘तीजको रहर आयो बरी लै’ नै हो। यति धेरैले मन पराएको र हरेक वर्ष बज्ने गीत भए पनि अचम्मको कुरा के भने यो गीत धेरैले गलत गाउने गर्छन्। यो गीतका वास्तविक शब्दहरु धेरैलाई थाहै छैन।
तँ बढी जान्ने भएको? तँलाई चाहिँ कसरी थाहा भो के हो भनेर सोध्नुहोला। यो गीत लेख्ने चेतन कार्की हुन्। उनैले भनेको कुरा त पत्याउनु हुन्छ होला नि। कार्कीका अनुसार ‘तीजको रहर’को अर्थ माइती जाने, आमा भेट्ने, घरको गुनासो गर्ने, दर खाने आदि हो।
‘गाऔँ स्वर खोलेर दिदी र बहिनी’ पछिका शब्दमा पनि कन्फ्युजन धेरै छ। धेरैले ‘नाचौँ न मिलेर नाम लिई सैनी’ भन्ने गर्छन्। त्यसो हैन गीत लेख्ने चेतन कार्कीका अनुसार ‘नाचौँला मिलेर दामली सैनी’ हो।
8 thoughts on “तीजको त्यो चर्चित गीत जसको शब्दमा सबै झुक्किन्छन् : ‘तीजको रहर आयो बरी लै’”
चेतन कार्की ज्यूलाई नै मेरो सुझाव
तीजको लहर आयो बरी लै भने राम्रो हुन्छ अरु त थाहा थ्यो। मैले त लहर नै सुन्थें । रहर भन्दा लहर धेरै सुहाउँछ।
चरी भरर भन्ने गीत पनि तेस्तै छ। “यो मायाले हेरेन फर्की, अन्तै माया लाउने पो मन छ कि” हुनुपर्ने मा सबैले गलत गौछन: “यो मायाले हेरेर फर्की, अन्तै माया लाउने पो मन छ कि”. हेरेर होइन, हेरेन फर्की हो ग्वाचेहरु. अलि राम्रोसंग हेडफोन लाएर सुन्नुहोस, हेरेन फर्की हो.
हेर्नुस ओरिजिनल: https://www.youtube.com/watch?v=Rts05EBbLiw
अनि एसको कभर मा अनुप्रस्था ले गरेको गल्ति हेर्नुस: https://www.youtube.com/watch?v=kEZIu4q0Xs0
खै के खै के मेरो कान जचाउनु पर्ने बेला भयो जस्तो छ तपाई “नाचौँ न मिलेर नाम लिई सैनी” हैन भन्नु हुन्छ तर मेरो कानले तेइ सुन्छ,
यस्तो रिमिक्स सुनेर हुन्छ त, ओर्जिनल सुन्नु परो नि हजुर
उसो त पानी पनि कहाँ खाइन्छ र पिइन्छ हैन?
तर पानी खाने निहुँले तिम्रो घरमा आउँला भन्ने गीत पनि छ भनेर विमति राख्न पाइएला नि 😛
“रहर लाग्छ” र “लहर आउँछ” हजुर, गीतकै लेखक कार्कीसंग पनि बिमति राखियो। अर्थ बोधगम्य भए पनि “भोक निदायो”, “ढोका फुकाल्नुस”, “जुत्ता सिउरिनुस”, वा “पिसाब बस्नुहोस” त्रुटिपूर्ण सुनिन्छन्। अब, “नेपाली भनेको तैंले बोलेको मात्र ठीक हो र?” भन्नुहुन्छ भने “नमस्ते”।
बूढा संग भेटेरै सोध्या हो ?
हो त, हेर्नुभएन त्यहाँ?